AutoRap by Smule အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် AutoRap by Smule: Record rap over beats w/vocal FX
Autoreap နှင့်အတူသင်သည်သင်၏ RAPSMES ကိုမျှဝေရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအမြဲရှိသည်။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးရက်ပ်အယ်လ်ဘမ်ကိုသင်၏အသံဖြင့်ပုံတူပွားပါသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ရန်ထိပ်တန်းစည်းချက်များကိုအသုံးပြုပါ။ Cardi B ကဲ့သို့သောထိပ်တန်းအနုပညာရှင်များက Beats 5000 ကျော်မှရွေးပါ, Malone, Drake, Eminem နှင့် Dr.Dre တို့ဖြစ်သည်။ သင်၏ပရိသတ်များကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူမျှဝေပါ, ပရိသတ်ကိုတည်ဆောက်ပါ, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဖန်တီးသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ပါ။
သည်လွယ်ကူသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့် Rap လမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးပါ။ သင်၏ရိုက်နှက်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။ Autorap သည်သင်၏အသံသွင်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သောအသံကိုပေးသည်။ ၎င်းတို့ကိုချောမွေ့ပြီးပွတ်ပေးပါ။
All-Time Classics မှ All-Time Classics မှလူလတ်တန်းစားများထံမှနောက်ဆုံးပေါ်ဂန္ထဝင်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Hip-Hops သို့ရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်ရပ်ရွာ - တင်ထားသောစည်းချက်များနှင့်လုံးဝထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုကိုစစ်ဆေးပါ။ ကျနော်တို့တစ်ပတ်ကို songhookbook အသစ်ကိုစည်းချက်အသစ်များထည့်သွင်းခြင်းအသစ်ကိုတစ်ပတ်လျှင်3ကြိမ်ထည့်ပါ။
သည်တစ်ကိုယ်တော်ဖြစ်ရန်မလိုပါ ။ Autorap အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းပြီးအခြားဖန်တီးသူများကစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူတူပင်။ သင်၏ရင်ပြင်များကိုမျှဝေပါ, လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်, အခြားအရောအနှောများထံမှစိန်ခေါ်မှုများကိုယူပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ သင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပြီးတာနဲ့ Autorap ဟာသင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်တွေရဲ့တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် Rap-Offs ကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းထဲထည့်လိုက်တယ်။
ကိုဖန်တီးရန်သင်၏စည်းချက်ကိုယူဆောင်လာပါ။ သင်၏အခန်းငယ်များအပေါ်သင်၏အခန်းငယ်များကိုချောမွေ့စွာထားရန် Autoad လုပ်ရန်၎င်းကိုတင်ပါ။ သင်သည်ရပ်ကွက်မှအခြားအဆိုတော်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏စည်းချက်နှင့်အတူတစ်ခုခုဖန်တီးရန်သင်ကွောကျရှံ့အားပေးနိုင်ပါတယ်။ ရာနှင့်ချီသောအခြားထုတ်လုပ်သူများသည်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အမှန်တရားကိုယိမ်းယိုင်နေပြီးကိစ္စတွေကိုဝေမျှပါ။ မင်းမှာပြောစရာတွေအများကြီးရှိမရှိ, ဘယ်မှာစရမလဲဆိုတာမသိဘူးလား, မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကအရေးကြီးတယ်။ သင်၏အသံသွင်းချက်များကိုလူမှုမီဒီယာများပေါ်တွင်မျှဝေပါ, အခြားသူများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ပျော်စရာနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားကြည့်ရှုရန်အခြားသူများကိုဖိတ်ပါ။
RAP သီချင်းကိုအလွယ်တကူမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည် Skill level levelp
-re-beats and characterals များဖြင့်သင်၏ Rap Recr> များနှင့်အတူ Rob Recresals:
ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်များ, Autorap မူရင်းထုတ်လုပ်သူများထံမှစည်းချက် 5000 ကျော်မှရွေးပါ။
B >>> B>
သည်သင်၏အလွတ်အခန်းငယ်များကိုလေ့ကျင့်ပါ။ -Share ကိုပြပါ Social:
သင်၏သီချင်းများကို Facebook, Snapchat, WhatsApp, Twitter နှင့်ပိုမိုများပြားသောသီချင်းများကိုမြှင့်တင်ပါ။
သည်ထောင်နှင့်ချီသောအခြားအဆိုတော်များနှင့် ပူးပေါင်း.0င်ရောက်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်း.
ကိုဆက်သွယ်ပါ Rap တိုက်ပွဲများ:
သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရိုက်နှက်ခြင်း (သို့) အခြားသူများဖန်တီးခဲ့ရာကိုဖွင့်ပါ။ -leaderboards:
အသိုင်းအဝိုင်းမှထိပ်တန်းလမ်းကြောင်းများကိုကြည့်ပြီးပြိုင်ပွဲများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြတ်. သင်၏အောက်ပါတို့ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောစည်းချက်ကို အသုံးပြု. သင်၏ရက်ပ်>
ဘာအသစ်လဲ AutoRap by Smule: Record rap over beats w/vocal FX 3.1.1
Free Android App to Sing Song With Karoke | AutoRap by Smule: Record rap over beats w/vocal FX
AutoRap transforms intoarapper's expression (and rapping is by now)
pyae sone phyom.
i like app😘😘😘
ျမန္မာျပည့္သာ ေမာ္လၿမိဳင္ က